3 Ruux oo ku Dhimatay Shil Gaari oo ka Dhacay Sheerbi iyo 4 Dhaawac ah (Sawiro) – Radio Daljir
May 16, 2017 3:29 g 3
Saddex ruux ayaa ku dhimatay afar kalena dhaawac ayaa ka soo gaarey shil gaari oo ka dhacay deegaanka Sheerbi oo kuyaal duleedka magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ee Puntland.
Shilka oo uu galay gaari nooca raaxada ah ayaadadka ku dhaawacmay oo mid kamid ah carruur yahay waxaa lagu dabiibayaa xarumaha caafimaadka ee magaalada Qardho.
Koox ka socota Idaacadda Daljir oo gaarey goobta uu shilku kadhacay ayaa waxa ay soo direen sawirrada hoose.
Shirkii Arrimaha Dastuurka ee Muqdisho oo War Murtiyeed laga soo Saaray
Liibaan Mohamud Maahir 2 years
mohamed massari 2 years
Runtii waa kaxumahy ilaahey ha unaxariisto intii ku dhimatey kuwa dhaawaaca ahna Eebe ha uboogo dhayo. Intaas kadib wxn leeyahy darawalada baabuurta si taxadar leh ha ukaxeeyaan baabuurta. mahadsanidiin R. Daljir iyo shirkada Gayigeena ee Golis Telcome Somalia
3 Ruux oo ku Dhimatay Shil Gaari oo ka Dhacay Sheerbi alah ha u naxaristo janatu fardowsa allah hka dhigo gurigood dhawacana allah ha caFimaadiyo